बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफैं सिईओ नियुक्त गर्न नपाउने ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफैं सिईओ नियुक्त गर्न नपाउने !
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ)को छनौट आफैंले गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बंंैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सिईओ छनोट राष्ट्र बंैक आफैले गर्ने गरी मौद्रिक नीति तय गरिएको बताएका हुन्।
उनले मंगलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वच्छताका लागि पनि त्यसका सिईओको छनोटमा हस्तक्षेप गर्न लागिएको बताए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताए। बैठकमा सांसदहरुले बैंकिङ कसुर लागेकाहरुलाई पनि बैंकको सिईओ बनाउँदा पनि नियमन गर्न नसकेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको चर्को आलोचना गरेका थिए।
सांसद हृदयश त्रिपाठीले बैंकिङ कसुर लागेकाहरुलाई पनि बैंकले सिईओ नियुक्ती गर्दा पनि कार्वाही गर्न नसकेकोभन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको चर्को आलोचना गरेका थिए। त्यसैगरी सांसद तेजुलाल चौंधरीले गैर कृषकहरुलाई कृषि लोन प्रवाह गर्दा पनि नियमन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका माथि प्रश्न उठाएका थिए।
उनले कृषि लोनमा विचौलियाहरुको प्रवेश निषेध गर्न पनि नेपाल राष्ट्र बंैकलाई सचेत गराए। सांसद चौंधरीले बैंकहरुले निक्षेप संकलनको नाममा सर्वसाधारणलाई ठगी गरिरहेको आरोप लगाए।
लुक्लादेखि सगरमाथाको चुचुरोसम्म बुद्धको स्टीकर
गौतम बुद्धको जन्मस्थल सम्बन्धी विभिन्न मुलुकमा रहेको भ्रम चिर्ने अभियानमा लागिरहेका चर्चित गायक धिरज राईले सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गर्दै यो अभियानमा पर्वतारोहीलाई पनि संलग्न गराएका छन् । पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण केन्द्रमा भएको कार्यक्रममा गायक राईले ‘बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल’ लेखिएको बुद्धको तस्वीर अंकित स्टीकर लुक्लादेखि सगरमाथाको चुचुरोसम्म राखिने बताए ।
‘पर्वतारोहीले चिर्नेछन् बुद्धको भ्रम’ शीर्षकमा सुरु हुने यो अभियानमा गायक राईलाई १६ पटक सगरमाथा आरोहण गरेका जाङ्बु शेर्पाले साथ दिदैछन् । शेर्पाले बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल लेखिएको स्टीकर सगरमाथाको चुचुरोसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा ५० भन्दा बढि पर्वतारोही सहभागि थिए । सहभागि सबै पर्वतारोहीलाई स्टीकर पनि बाँडिएको थियो । पर्वतारोहीले अभियानकै रुपमा विदेशी नागरिकलाई गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपाल रहेको तथ्य जानकारी गराउने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् ।
यसै अभियान अन्तर्गत गायक राईले केही दिन अघि भेडेटारका ५० होटलमा पनि स्टीकर टाँसेका थिए ।